बीबीसीबाट जाँदाजाँदै सुमन खरेल - BBC News नेपाली
बीबीसीबाट जाँदाजाँदै सुमन खरेल
Image caption सन् २००९ मा आयोजित 'रोडशो' का क्रममा सुमन खरेल, बीबीसी नेपाली सेवाका संवाददाता विक्रम निरौलासंग
दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत हाम्रा सहकर्मी सुमन खरेलको जीवनले शनिबारदेखि यात्राको नयां मोड लिंदैछ।
उनी रेडियो पत्रकारिताकै पेशामा त हुनेछन्, तर अब उनी मूल रुपमा ब्रिटिश सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुका लागि संचालित बीएफबीएस रेडियोमा सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हाल्न जांदैछन्।
सन् १९९२ मा बीबीसी नेपाली सेवामा समाचार पढेर आफ्नो बीबीसी यात्रा शुरु गरेका खरेलले शुक्रबार नेपाली सेवामै समाचार पढेर आफ्नो बीबीसी यात्रा टुंग्याए।
त्यसअघि उनले सहकर्मी जीतेन्द्र राउतसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सुमनजी तपाईंलाई अहिले कस्तो अनुभूति भैरहेछ?
एक हिसाबले दुख लागिरहेको छ। २२, २३ वर्ष बसेको घर छोडेर आज सांझ फर्कनु पर्दाखेरि। अलिकति नियास्रो, मनमा अलिकति दुख अवश्य छ।
जीवनको एउटा कालखण्ड नै तपाईले पत्रकारिता पेशामा लगाउनुभयो। यसक्रममा तपाईंका विशेष रुपमा सम्झने अनुभवहरु के के छन्?
धेरै नै छन् यत्रो बीस, बाइस वर्षको दौरानमा। सबैभन्दा पहिला आउँदा १९९२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाइ कोइरालालाई प्रधानमन्त्री निवासमा बीबीसीले एउटा ठूलो कार्यक्रम गरेको थियो, जहाँ संसारभरिका मानिसहरुले उहाँलाई प्रश्न सोध्थे। अँग्रेजीमा सोधिन्थ्यो र अँग्रेजीमा उहाश्ँले जवाफ दिनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ शुरुमा आउने बित्तिकै एउटा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि पनि प्रचण्ड पहिलोपटक सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डलाई प्रश्न एउटा नौलो शैलीको थियो र पहिलोपटक नेपाली सेवाको त्यो कार्यक्रम नेपाली टिभि च्यालनमा पनि प्रसार भएको थियो। त्यस्ता अनेक उदाहरणहरु छन्।
बीबीसीमा दुई दशक बिताएर अवकाश लिंदैहुनुहुन्छ। यस क्रममा व्यक्तिगतरुपमा के उपलब्धि हासिल गरेंजस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
व्यक्तिगतरुपमा मैले जहिले पनि एउटा नाम चाहेको थिए जिन्दगीमा, त्यो नाम मैले रेडियो नेपाल र बीबीसीमा पाएँ। मेरा श्रोताहरुले यति माया दिनुभयो कि त्यो बयान गरेर सक्दिनँ पनि। त्यो माया र त्यो साथ, मलाई जति पनि आज चिन्नुहुन्छ त्यो सबै बीबीसी नेपाली सेवाका र त्यसअघि रेडियो नेपालका श्रोताहरुले दिनुभएको साथ, सहयोग, माया र सद्भाव मेरो जीवनमा सँधै रहिरहनेछ। मेरा सहकर्मीहरु जसले मलाई दिनरात हरेक कार्यक्रमको लागि उत्साह दिए, साथ दिए, ती सबैप्रति म सँधै आभारी छु। र, मेरो परिवार पनि जसले मलाई हरेक कदममा साथ दिएका छन्, उनीहरु सबैलाई संझन चाहन्छु।
एउटा विशेष कुरा यो पेशाबाट, यो यात्राबाट तपाईंले के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा तपाईंको जवाफ के हुनेछ?
मैले मेरो नाम लिएर जाँदैछु। मेरो पहिचान जुन सन्चार माध्यममा स्थापित भएको छ। यतिका वर्ष त्यो नै मेरो सन्तुष्टि हो, त्यो नै मेरो इज्जत र प्रतिष्ठा हो। म त्यो नै लिएर जाँदैछु।
र, अन्त्यमा सुमनजी तपाईंको आवाज र प्रस्तुतिका लाखौं प्रशंसकहरु छन्, उनीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
जहिले पनि धन्यवाद दिनैपर्छ मैले मेरा हजारौं, लाखौं श्रोता, प्रशंसकहरुलाई, मेरा सहकर्मीहरुलाई, मेरा अभिन्न साथीभाइ र मेरो परिवारका सदस्यहरुलाई। खासगरी जानेबेलामा धेरैले सोध्छन् किन फर्कन लागेको त नेपाल भनेर। म सँधै मेरो बुवा किरण खरेलले रच्नुभएको, तारा देवीले गाउनुभएको एउटा गीतको संझना गर्छु:
को हुँ म, के हुँ म, कुनै मेरो नाउँ छेन, कतै मेरो गाउँ छैन पाइलाहरु हिंडी दिन्छन्, पुग्ने कतै ठाउँ छैन............
शायद त्यसैले म नेपाल फर्कन चाहन्छु।
अन्तर्वार्ता सुन्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्
सुमन खरेलसंगको कुराकानी